29 Jiona 2019 - FJKM Québec - Canada Aza matahotra, sahia mijoro amin'ny finoanao amin'ny trangan-javatra rehetra.
29 Jiona 2019
29 juin 2019 by Njaka Ramanandafy
ASAN’NY APOSTOLY 24:22 – 25:12
24:22 Ary satria fantatr’i Feliksa tsaratsara kokoa ny amin’izany fampianarana izany, dia nampandeha azy rehetra izy aloha ka nanao hoe: Rehefa tafidina aty i Lysia, mpifehy arivo, dia hofotorako tsara ny raharahanareo.
24:23 Ary izy nandidy ny kapiteny hiambina an’i Paoly sy hamela azy hitsangantsangana ary tsy handrara olona na dia iray akory aza amin’ny sakaizany izay ho avy hanompo azy.
24:24 Ary rehefa afaka andro vitsivitsy, dia tonga i Feliksa sy i Drosila vadiny, vehivavy Jiosy, dia nampaka an’i Pao Ary rehefa afaka andro vitsivitsy, dia tonga i Feliksa sy i Drosila vadiny, vehivavy Jiosy, dia nampaka an’i Paoly izy ka nihaino azy nitory ny finoana an’i Kristy Jesosy.
24:25 Ary raha nitory ny amin’ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy, dia raiki-tahotra i Feliksa ka namaly hoe: Mandehana angaloha; fa raha malalaka, dia hampaka anao indray aho.
24:26 Sady nanantena koa izy fa homen’i Paoly vola; ka dia nampaka azy matetika izy ka niresaka taminy.
24:27 Ary rehefa afaka roa taona, dia i Porsio Festosy no nandimby an’i Feliksa; ary i Feliksa te hahazo sitraka tamin’ny Jiosy, ka dia mbola navelany ho mpifatotra ihany i Paoly.
25:1 Ary i Festosy, nony tonga teo amin’ny zara fanapahany, dia niala tany Kaisaria hiakatra any Jerosalema, rehefa afaka hateloana.
25:2 Ary ny lohan’ny mpisorona sy ny olona manan-kaja tamin’ny Jiosy nanambara taminy izay niampangany an’i Paoly sady niangavy taminy
25:3 ka nangataka azy hohelohina, mba hampanalainy hankany Jerosalema; fa nikasa hanotrika eny amoron-dalana izy hamonoany azy.
25:4 Ary i Festosy namaly fa i Paoly dia ambenana any Kaisaria, sady izy koa efa hankany faingana.
25:5 Koa izay manam-pahefana eo aminareo, hoy izy, no aoka hiara-midina amiko ka hiampanga an-dralehilahy, raha manan-keloka izy.
25:6 Ary rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny havaloana na hafoloana izy, dia nidina nankany Kaisaria; ary nony ampitso dia nipetraka teo amin’ny fitsarana izy, ka nasainy halaina i Paoly.
25:7 Ary nony tonga izy, dia nitsangana manodidina azy ny Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema, ka zavatra maro sady lehibe, izay tsy azony nohamarinina akory, no niampangany azy;
25:8 fa i Paoly nandaha-teny hanala tsiny ny tenany hoe: Tsy nanao ratsy aho, na tamin’ny lalan’ny Jiosy, na tamin’ny tempoly, na tamin’i Kaisara.
25:9 Nefa i Festosy te hahazo sitraka tamin’ny Jiosy, dia namaly an’i Paoly ka nanao hoe: Tianao va hiakatra any Jerosalema hotsaraina eo anatrehako any ny amin’ izany zavatra izany?
25:10 Fa hoy i Paoly: Eto amin’ny fitsaran’i Kaisara, izay tokony hitsarana ahy, no itsanganako. Tsy nanisy ratsy ny Jiosy akory aho, ary na ianao aza dia mahafantatra izany marina.
25:11 Koa raha mpanao ratsy aho, na nanao izay tokony hahafaty ahy, dia tsy manda tsy ho faty aho; fa raha tsy marina kosa izay zavatra iampangan’ireo ahy, dia tsy misy olona mahazo manolotra ahy ho amin’ny sitrapony. Handahatra eo anatrehan’i Kaisara aho.
25:12 Ary rehefa niresaka tamin’ny mpanolotsaina i Festosy, dia namaly hoe: Efa nifidy ny handahatra any anatrehan’i Kaisara ianao, ka dia ho any amin’i Kaisara ihany ianao.
Nahemotra intelo ny fitsarana an’i Paoly (Asa 24.22; 24-25;25.9) ny fitsarana an’i Paoly , ary tsy mety voatsara nandritra ny roa taona izy noho ireto antony ireto:
1-Ny fahalemen’ny mpitsara
Fahalemena telo no hita teo amin’ny mpitsara .
-Fatahorana ny fitsarana ho avy (Asa 24.24-25) . Mpitsara mbola hotsaraina tokoa manko ny governora eto.
–Fitiavana kolikoly (Asa 24.26) . Tia vola koa ny mpitsara eto , ka nanantena izy fa hanome vola azy iPaoly .
-Fitia te-hahazo sitraka amin’ny Jiosy (Asa 24.27;25.9) samy nila sitraka tamin’ny Jiosy na i Feliksa (Asa 24.27) na i Festosy (Asa 25.9).
2-Ny fijoroan’i Paoly ho vavolombelona marina
Nahemotry ny mpitsara ny fitsarana (Asa 24.22) noho ny nilazan’i Paoly ny finoany , ny fitsanganana amin’ny maty , izay antony iampangana azy (Asa 24.21) . Sahy nijoro amin’ ny fnoany i Paoly . Nahemotra fanindroany ny fitsarana satria sahy nitory an’i Jesoa Kristy sy ny fitsarana ho avy teo anatrehan’ny mpitsara i Paoly (Asa 24.24-25). Ny fijoroana nataon’i Paoly eto dia hy fahasahiana miteny sy ny fijoroany tamin’ny fiainany andavanandro mihitsy , nanao ny marina teo anatrehan’ny fiaraha-monim-pivavahana sy fiaraha-monim-panjakana.